Uma uyayifunda le, kusho Day Valentine ekhoneni, futhi usengakayitholi ungavezi ngesipho umlingani wakho futhi manje lamaSulumane kwi-inthanethi beyofuna tesimongcondvo. Sikulungele ukukusiza nalokhu, futhi anikele imibono embalwa isipho ukuze ivumelane izinto ezingafani futhi amabhajethi. Eziningi zalezi izipho okudingeka bashintshashintshe ngayo: efanelekayo kokubili Indoda for girls, yasekuqaleni futhi yothando.
izipho zothando for Day Valentine sika
Ngisho noma ngabhala nenkondlo kuphela zisencane, futhi yimpumelelo kakhulu imvumelwano yakho "uthando-isanqante-igazi", use- ukumangala futhi sijabulise Faka isithandwa sakho le nkondlo ngothando ungcono Petrarch. Futhi ukukusiza kule professional izimbongi, isilungele imali okuzisholo ngezinye izikhathi eyokuthandana ukuchaza zonke vicissitudes kobuhlobo bakho futhi ukuyithanda ethandekayo / ozithandayo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi oda portrait yakho, ilunga isithombe session e isitayela love story, ukubhala ingoma yakhe wakhe / professional umculo studio ucele pheqela emsakazweni ngesikhathi esifanele. Noma ngisho ukucula misindo ngaphansi kwewindi ngendlela endala.
Enye kungaba isipho romantic encwadini yakho, abhalwe isitayela inganekwane mayelana nothando. Ngo wakhe ulimi lwasemaphusheni adingida ubuhlobo bakho, liphetha ngamazwi athi "baphila kamnandi ....", Futhi imifanekiso ukukhonza njengephayona izithombe zakho. Amasevisi ukudalwa zalezi zincwadi inikeza ejensi eziningi zitholakala kalula nakuyi-Internet.
kusihlwa zothando e isitayela Zorro - liphinde libe yisipho esihle Day Valentine. Une ukweba (ngomqondo truest izwi) umngane wakhe ongaqaphile emsebenzini ungenise ehhotela yasemakhaya, lapho uyobe ulinde foamy kubhavu ashisayo kanye dinner kusukela aphrodisiacs kwezilwandle. Ngoba indoda, ungahlela i kusihlwa e isitayela 1000 1 ubusuku: ngifuna indawo noma ehhotela Igumbi ngesitayela Oriental, kuye ngombono wakho, ungakwazi umeme strippers amantombazane nabo ukuba bagqoke up in ubuhle zaseMpumalanga futhi sithokozise emehlweni ozithandayo incendiary umdanso ovusa inkanuko (ubhalisele izifundo pre-strip plastic).
Isitifiketi ukusetshenziswa ahlangene spa nge massage Thai kuzoletha kumnandi nobabili.
Nikeza zangaphansi intombi yakhe e Day St Valentine Sekuyisikhathi eside lutho, kodwa isimo zizoshintsha ngokuphelele uma unganqotshwa zangaphansi ezidliwayo ezenziwe ushokoledi, okuyinto neze umzimba wakhe ngalesi gqamisa Culinary phakathi nezinjabulo uthando.
Yini ukunikeza for Day Valentine sika fan of imidlalo eyingozi?
Parachute gxuma esihambisana isigamu layo malihlale imizwa yakho ingaba njengendlela ukuguqulwa intambo-jumping - jumping ebhulohweni ngentambo noma paragliding ngokuhlanganyela. Uma ungeyena kakhulu ngakho, ungahlala ngehhashi noma isikwele ngebhayisikili.
Isipho kangcono Day Valentine - ezenziwe ngezandla zabo
Tie eyintandokazi / ijezi zakho ozithandayo, noma okungenani isikhafu futhi amasokisi! Yena kuzosithinta umphefumulo wakho womshado uma ungekho, futhi ngesikhathi esifanayo njalo ukukhumbuza naye kini.
Ngifaka isandla-Maid Nokho futhi akakwazi ukukhonza njengesipho ephelele, kodwa ukuhlobisa kanye umphelelisi ngokuphelele iyiphi into esikhethiwe, egcizelela imizwa yakho futhi ubuntu.
Okunye imibono yokuqala izipho ngosuku lwezithandani
Sexy kusukela kuzithombe zakho: imininingwane eyengeziwe, le mnandi. Ngesikhathi esifanayo, kuphendule umbuzo ukuthi benzeni kusihlwa!
Pit, yaqanjwa wena noma uphathini wakho (ngokuqonda kuphela ukuthola kusengaphambili ukuthi izilwane uyabathanda), kodwa kunalokho pair - ngokwesibonelo, hamsters nenhlanzi.
Uma usuvele wanikeza konke noshade naye ngendlela engafinyeleleki ichithekile, imnike / kuye inkanyezi ivela esibhakabhakeni! Yebo, ngempela, futhi ukubiza igama lakhe. Noma, kungenjalo, isiza kuphi on enyangeni noma Mars. Lokhu kuzokusiza ukuba ukusebenza Observatory eliseduze noma esikhungweni sokuhlola izinkanyezi.
Usuku luka-Valentine - kuba isikhathi emangalisayo waphinda khombisa ukugcwala imizwa yakho ukuba othandekayo wakho, kodwa futhi, ungakhohlwa ukwenza njalo esikhathini ezisele ezingu-364.
Yini engenziwa ngemaholide isonto (izimpawu)?
Mercedes E-Class 2013 - ezemidlalo induduzo ezishintshayo zabantu abasesigabeni esiphakathi zaziba
Big Shigir idol: isithombe, ubudala, incazelo
Kanjani amandla okubhekana nephrotic syndrome?
Job Description Mechanics. Job Description Chief Mechanic